Juventus oo qorsheeneysa in Man City iyo Barcelona ay ku garaacdo saxiixa mid ka mid ah xiddigaha ugu shidan Premier League – Gool FM
(Yurub) 08 Luulyo 2020. Juventus ayaa la sheegay in ay kula tartami doonto kooxda Manchester City si ay ula soo saxiixato xiddiga kooxda Wolverhampton Adama Traoré.
Sida laga soo xigtay shabakada “ESPN” Adama Traoré ayaa wuxuu doonayaa inuu ka tago kooxdiisa Wolverhampton haddii ay ku guuldarreystaan ​​inay u soo baxaan Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Juventus ayaa hadda indhaha kala furtay, waxayna dooneysaa in heshiiska Adama Traoré ay ku garaacaan kooxaha Barcelona iyo Manchester City.
Juventus ayey qasab ku tahay inay ku garaacdo loolanka loogu jiro saxiixa Adama Traoré kooxda City, maadaama ay kooxda reer England ay dooneyso inay soo iibsato xiddig cusub ee si wanaagsan ugu ciyaari kara weerarka garabka, kaddib bixitaankii Leroy Sané, kaasoo ku biiray naadiga Bayern Munich.
24 jirkan ayaa gaaray guulo waa weyn xilli ciyaareedkan, kaddib markii uu dhaliyay 4 gool, wuxuuna ka caawiyay 9 gool kale saaxiibadiis kooxda Wolverhampton tartamada oo dhan.
Dhanka kale, qiimaha Adama Traoré ma noqon doono mid raqiis ah, sababa la xiriira in qandaraaskiisa naadiga Wolverhampton uu wali kaga harsan yahay 3 sano oo kale, waxayna kooxda dooneysa inay iibsato ay ku qasbanaan doontaa bixinta ku dhawaad 80 million pounds.